I-EFF idube uZuma evela ephalamende | News24
I-EFF idube uZuma evela ephalamende
Cape Town – Iqembu le-EFF likhethe ukukuduba ukuvela kwaMengameli wezwe okokugcina ephalamende njengoba ebezophendula imibuzo ngoLwesithathu.
Kuqaphelekile ukuthi amabhentshi e-EFF abekhala ibhungane ngenkathi kuqala lokhu kuphendulwa kwemibuzo okuqale ngo-15:00 ntambamba.
OLUNYE UDABA: UNdlozi uxwayise umfundisi weDoom, "i-EFF iyeza"
NgoLwesithathu, leli qembu lithe angeke lize libambe iqhaza ngoba alimthathi uZuma njengoMengameli wezwe.
“UJacob Zuma watholwa yiNkantolo yoMthethosisekelo ukuthi waphula isifungo sakhe sehhovisi, futhi ngalokho wabukela phansi uMthethosisekelo kulokhu wahluleka ukuweseka kanye nokuwavikela,” kusho okhulumela i-EFF, uMbuyiseni Ndlozi.
UNdlonzi uthi uZuma waqhubeka ukuvikela uMthethosisekelo mayelana nokulungiswa komuzi wakhe oseNkandla, “nalapho azuza khona ngokufanele ekuxhashazweni nasekungasebenziseni kahle kwezimali zoMbuso”.
Leli qembu liphinde lasola uZuma ngokuthinteka ekuxhashazweni kwezinsiza zoMbuso ukuze azuze yena qobo lwakhe. Lokhu kumayelana nombiko woMvikeli woMphakathi owasusa umsindo ngezinsolo zokulawulwa kombuso.